တစ် ဦး က relapse ပြီးပြည့်စုံသောပြန်လည်သတ်မှတ်မဆိုလိုပါ အရက်သောက်ခြင်းဖြင့်နောက်ထပ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမထိခိုက်ပါနှင့်။ - သင့် ဦး နှောက် Porn တွင်
ငါကဒီမှာပို့စ်တွေအများကြီးထဲမှာတွေ့မြင်တစ်ဦးကဘုံဆောင်ပုဒ်တစ်ခု relapse ပြီးနောက်ကာလ၏နောက်လာမည့်စုံတွဲတွေအတွက်မူးရူးသွားဖို့စိတ်သဘောထားဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျပြီးသားသင်ကဲ့သို့ကောင်းစွာပွညျ့အဝက၏အားသာချက်ယူစေခြင်းငှါ, ကျရှုံးခဲ့ဖူးပါတယ်လျှင်သောစိတ်ဓာတ်။ ဤသို့ပြု၌ငါကျွန်တော်တို့ကိုအများကြီးနားလည်သဘောပေါက်ရန်ပျက်ကွက်သောအရာကိုထင်ကျွန်တော်ပြန်ရောက်သွားတယ်င့်သော်လည်းထိုသို့အတိတ်ရက်ပေါင်းသို့မဟုတ်ရက်သတ္တပတ်အတွင်းမှာအားလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုအချည်းနှီးဖြစ်ကြောင်းကိုမဆိုလိုပါ, သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဦးနှောက်အလွန်ပလပ်စတစ်ဖြစ်ပြီးလျင်မြန်စွာသူ့ဟာသူပြောင်းပေးဖို့ထူးခြားတဲ့စွမ်းရည်ရှိပါတယ်။ သငျသညျအပြည့်အဝ 90 ရက်ပေါင်းသွားပြီကြပြီမဟုတ်ရင်တောင်, သင်ဆဲသင့်ဦးနှောက်ကိုယ်တိုင်က rewire ဖို့အချိန်တွေအများကြီးပေးထားပါတယ်။ တဦးတည်း relapse လုံးဝကြောင်း reverse မထားဘူး။ ငါထွက်ရှိပါတယ်သင်တို့တွင်အချို့သော PMO စွဲနှင့်အတူအချို့သောအလေးအနက်ကိစ္စများရှိသည်ကိုသိနှင့်ဖြစ်နိုင်သည် relapsing မရှိဘဲရက်ပေါင်း၏စုံတွဲတစ်တွဲထက်ပိုသွားရပေမယ့်သင်ကမပါဘဲသာ3သို့မဟုတ်4ရက်ပေါင်းသွားကြဖို့စီမံခန့်ခွဲလျှင်ပင်, ကသေးရဲ့ကြောင်းကို၎င်းအောက်မေ့လို့မရပါဘူး တခါကလုပ်နေတာသို့မဟုတ်အကြိမ်ပေါင်းများစွာတစ်ရက်ကျော်ကြီးမားသောတိုးတက်မှု။ နေ့စဉ်နေ့တိုင်းနှင့်သင်ရှောင်ကြဉ်တိုင်းနာရီများအတွက်, သင်သည်သင်၏ဦးနှောက်အနာရောဂါကိုငြိမ်းစေအဖိုးတန်အချိန်ပေးခြင်းပါပဲ။
သင်တစ်ဦးကျိုးခြေထောက်လိုအဖြစ်သင့်ပြန်လည်ထူထောင်ဦးနှောက်ဆက်ဆံဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ သင်ဟာသင့်ရဲ့ခြေထောက်ကိုချိုးဖျက်သည်ဟုမပြောစေခြင်းနှင့်ဆရာဝန်သင်တစ်ဦးသွန်းဝတ်ဆင်ခြင်းနှင့်6ပတ်ခြေထောက်ပေါ်မဆိုအလေးချိန်ကိုမထားရန်ရှိသည်သောသင်ပြောပြသည်။3ရက်သတ္တပတ်အကြာတွင်သင်တစ်ဦးလျင်ရောက်နေဆိုပါစို့နှင့်မတော်တဆကြောင့်ပေါ်မှာရှိသမျှကိုသင်၏အလေးချိန်ထားတော်မူ၏။ ဒါဟာအများကြီးနာကျင်သင်ကပိုပြီးဆုံးရှုံးနစ်နာစေကြလိမ့်မယ်ကြောက်လန့်ပါတယ်။ ဒီဇာတ်လမ်းထဲမှာပြုကြဖို့အကောင်းဆုံးအရာကဘာလဲ? ဖြစ်ကောင်းခြေထောက်ပေါ်နောက်တဖန် strain ချပြီးရှောင်ရှားနှင့်ကအနာရောဂါကိုငြိမ်းစေဖို့အချိန်ပေးပါ။ အလားတူ NoFap အဘို့အတတ်ပေမယ့်အခါသင်မူးရူးကကောင်းပြီ, ငါပြီးသားအကြှနျုပျ၏ခြေထောက်ဒဏ်ရာရ "ဟုတူသောအခြေခံအားဖြင့်ဖွင့်မယ့် relapse ပြီးနောက်။ ကျွန်မအဖြစ်ကောင်းစွာယခုနဲ့မာရသွန်ပြေးသွားပါလိမ့်မယ်။ "
ကျွန်ုပ်တို့၏ဦးနှောက်ကျနော်တို့ကျရှုံးအခါတိုင်း "သင်္ဘောကိုစွန့်ခွာ" ကိုလိုခငျြတဲ့သဘောထားကိုရှိသည်။ နေ့စဉ်ကယ်လိုရီအစားအစာပေါ်ကလူကိုမြည်းစမ်းခြင်းနှင့်ကွဲပြားခြားနားသော cookies တွေကိုဘယ်လောက်ရှိသလဲထို့နောက်ပီဇာတစ်ဦးအချပ်ကိုစားခြင်းနှင့်ရန်လုပ်ရာတိုရွန်တိုတက္ကသိုလ်ပြုမိလေ့လာမှုတစ်ခုရှိခဲ့သည်။ တဦးတည်းအုပ်စုကပီဇာကတကယ်လုပ်ခဲ့တယ်နှင့်အခြားအုပ်စုကိုသူတို့ကန့်သတ်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောနေဆဲဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ကြသည်နေချိန်မှာသူတို့, သူတို့ရဲ့ကယ်လိုရီစားသုံးမှုန့်သတ်ချက်ထက်ကျော်လွန်ခဲ့ကြောင်းထက်ပိုကယ်လိုရီပါရှိသောကပြောကြားခဲ့ကြသည်။ မြေတပြင်လုံး cookie ကို-မျိုးစုံမြည်းစမ်းအစိတ်အပိုင်းသင်တန်းသားများကိုလှည့်စားရန်မယ့်အစီအစဉ်ရှိ၏ အစစ်အမှန်စမ်းသပ်ချက်သူတို့သည် စား. မယ်လို့မည်မျှ cookies များကိုကြည့်ရှုဖို့ဖြစ်တယ်။ အဘယ်အရာကိုသူတို့ရှာတွေ့သူတို့ကယ်လိုရီကန့်သတ်မှုကိုကျော်လွန်ခဲ့သည်ထင်သူအုပ်စုတစ်စုရှိလူမသောအုပ်စုတစုထက်ပို cookies များကိုစားရန်ဝေးကိုပိုမိုဖြစ်နိုင်ဖွယ်ခဲ့ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဤနေရာတွင် NoFap မှမဆိုတူညီမြင်ကြသည်မဟုတ်လော ဒါဟာကျွန်ုပ်တို့ကိုယျ့ကိုယျကိုမဘို့ရာခန့်င့်တဲ့ရည်မှန်းချက်နှင့်အတူကျရှုံးရသောအခါကျွန်ုပ်တို့၏ဦးနှောက်အကြောင်းပြချက်နှင့်စည်းကမ်းထွက်သွားနှင့်လာပြီသည်ကောင်းစဉ်ကတတ်နိုင်သမျှအားလုံးရဖို့ကြိုးစားပါတယ်ပုံရသည်။ ဒါဟာသင်လျင်မြန်စွာသတိနှင့်ကြဉ်ရှောင်ခြင်းနှင့်ရပ်တန့်ဖို့ရှိသည်တဲ့သဘောထားကိုဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်လိုလဲ?
ပျက်ကွက်မှုအတွက်ပြင်ဆင်ပါ။ ကျနော်တို့ထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင်ဒီရတယ်နဲ့တူနှင့်ထပ်သွေးဆောင်မှုမှအရှုံးမပေးဘယ်တော့မှလိမ့်မယ် - ကျွန်တော်ပြန်သွားကြသည်သွားဘယ်တော့မှဖွင့်နဲ့တူတခါတရံခံစားရ၏။ ပြီးတော့ကျနော်တို့ပြန်ရောက်သွားတယ်တော်မူပြီးမှငါတို့လက်၌အဒစ်နှင့်အတူလမ်းဆင်း, ကိုယျ့ကိုယျကိုတစ်လ, ဒါမှမဟုတ်ပင်တစ်နှစ်ရှာပါ။ ဒါဟာကျွန်တော်တို့ကိုအကောင်းဆုံးမှဖြစ်ပျက်နိုင်ပါတယ်။ အဘယ်အရာကိုကျွန်တော်လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဒီကိုယျ့ကိုယျကိုကွိုတငျပွငျဆငျဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ အဘယ်သို့ငါပြုရမည်ကိုသင်အကြံပေးမယ်လို့စာရွက်တစ်ရွက် get သို့မဟုတ်သင်၏လိုင်းများတလျှောက်တွင်တစ်ခုခုရေးလိုက်တဲ့စာသားအားစာရွက်စာတမ်းကိုဖန်တီးရန်ဖြစ်ပါသည်:
"ကျနော်တဦးတည်း relapse တစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စဉ်ကိုညှနျ့ခြိုးပါဘူးသဘောပေါက်။ ကျွန်မကာလ၏အတိတ်စုံတွဲအတွက်တိုးတက်မှုအများကြီးရာ၌ခန့်ထားပြီငါစိန်ခေါ်မှုမှချောင်းကိုအဖြစ်နေသမျှကာလပတ်လုံးဆက်လက်မည်ဖြစ်ပြီးတစ်မူးရူးပေါ်မသွားကြပါဘူး။ ယခုတွင်ငါသည်တစ်ဦးလမ်းလျှောက်သွားရမယ့်ရေချိုးယူ, ပြီးတော့ငါ့အတံဆိပ်ကို reset နှင့်အရင်ကထက်ပိုပြီးပြဌာန်းခွင့်နှင့်စည်းကမ်းနှင့်အတူဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်။ ငါသည်ဤထက်ပိုမိုအားကောင်းဖြစ်၏။ ငါမချိုးမည်။ "
သငျသညျ relapse ပြုလျှင်, ထို့နောက်ချက်ချင်းသင်ကိုယ်တိုင်ရေးသားပါတယ်အဘယ်အရာကိုဖတ်ပါနှင့်အခြားအဆင့်များနှင့်အတူရှေ့ဆက်။ လမ်းလျှောက်သွား - ကသင်၏ခေါင်းကိုရှင်းလင်းကူညီပေးပါမည် - နှငျ့သငျအပေါ်အလွန်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသန့်စင်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်တဲ့ရေချိုးခန်း, ယူ - သင့်ရဲ့အသားအရေကိုသွန်းနှင့်နောက်တဖန်မွေးဖွားလျက်ရှိသည်လျှင်အဖြစ်ခံစား။ သို့ပြုလျှင်သင်၏တံဆိပ်ကို reset သွားနှင့်အသစ်စတင်ရန်သင်သည်အတွင်းပြဌာန်းခွင့်ခံစားရတယ်။ မပျက်ကွက်အဖြစ်ပေမယ့်နောက်ထပ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသင်ယူစိန်ခေါ်ဖို့အခွင့်အလမ်းအဖြစ်ကိုကြည့်ပါ။ အရင်ကထက်ပိုမိုအားကောင်းနှင့်ပညာရှိပြန်လာမယ့်အခွင့်အလမ်းအဖြစ်ကိုကြည့်ပါ။